#Breaking_News : ဘလှနျးဒီအျောဆု အတှကျ ဆနျကာတငျ စာရငျး ထှကျပျေါလာပွီ!!! - SPORTS MYANMAR
#Breaking_News : ဘလှနျးဒီအျောဆု အတှကျ ဆနျကာတငျ စာရငျး ထှကျပျေါလာပွီ!!!
ဘောလုံးလောက ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ အကွီးမားဆုံး ဆုဖွဈတဲ့ ဘလှနျးဒီအျောဆု 2019 ခုနှဈ အတှကျ ဆနျကာတငျ စာရငျး အယောကျ 30 ကို ထုတျပွနျ ကွငွောလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ စာရငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အတှငျး တကယျခွစှေမျးပွ ကစားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားတှေ အမြားစု ပါဝငျလာခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အကွား အမွငျမတူမှုတှေ ၊ အငွငျးခုံမှုတှတေော့ နညျးပါးနမှောပါ။ ထူးခွားတာက ဖီဖာ အကောငျးဆုံး 11 ယောကျ စာရငျး မှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ရီးရဲ မကျဒရဈ ကစားသမားတှေ ဖွဈတဲ့ ရာမို့ဈ ၊ မာဆယျလို ၊ မိုဒရဈ တို့ဟာ ဘလှနျးဒီအျောမှာတော့ ဆနျကာတငျ စာရငျးမှာတောငျ ပါဝငျနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
ဆနျကာတငျ စာရငျး အယောကျ 30 ကို သုံးသပျကွညျ့ရရငျ လီဗာပူး အသငျးက အရအေတှကျ အမြားဆုံး ဖွဈပွီး ၊ ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ အသငျးက စုစုပေါငျး7ယောကျ အထိ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ နောကျထပျ ကနြေပျစရာ တဈခုက အင်ျဂလနျ ရဲ့ ပွညျတှငျး ဖလားအားလုံးကို သိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး အသငျးကလဲ ကစားသမားပေါငျး5ယောကျ အထိ ပါဝငျခဲ့သလို ၊ ရာသီ ကုနျခါနီးမှ ခှာလိပျသှားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကလဲ4ဦး အထိ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျ မှာ ပရိသတျတှေ အားလုံး အံ့အားသငျ့အောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့တဲ့ အဂေကျြ နဲ့ စပါး အသငျးတို့က ကစားသမားတှတေောငျ ဆနျကာတငျ စာရငျးမှာ ရှေးခယျြခဲ့သလို ၊ အာဖရိက ဖလား ဗိုလျလုပှဲ တကျရောကျခဲ့တဲ့ အသငျးတှကေ ကစားသမားတှထေဲက ကလပျမှာပါ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ သူတှကေို ထညျ့သှငျးလာခဲ့တာက ဘလှနျးဒီအျောရဲ့ တနျဖိုးကို လဈပွနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မာကှငျဟို ၊ ကူလီဘာလီ တို့ဟာ ဒီစာရငျးမှာ ပါဝငျနခေဲ့တာပါ။ ဆနျကာတငျ စာရငျးနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရတဲ့ နာမညျကွီး ကစားသမား အခြို့ ကတော့ နမော ၊ ပေါ့ဘာ ၊ ဟယျရီကိနျး ၊ ရာမို့ဈ ၊ မာဆယျလို ၊ မိုဒရဈ ၊ ခရူး ၊ ဆှာရကျ ၊ ကနျတီ ၊ ဘေးလျ ၊ ကော့တှိုကျ တို့ ဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ အသငျးကွီ6းသငျးကို ကွညျ့လိုကျရငျ ခြဲဆီး နဲ့ ယူရိုပါလိဂျမှာ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ဟာဇကျ ၊ လီဗာပူး ကစားသမား7ယောကျ ၊ စပါး က2ယောကျ ၊ မနျစီးတီး5ယောကျ နဲ့ အာဆငျနယျ က 1 ယောကျ ပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ ၊ ယူနိုကျတကျ ကတော့ တဈဦး တဈယောကျမြှ ဆနျကာတငျ စာရငျးအတှငျး ရပျတညျနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
ဆုပေးပှဲကိုတော့ လာမယျ့ ဒီဇငျဘာလ2ရကျနမှေ့ာ ပွငျသဈနိုငျငံ ၊ ပဲရဈမှာ ကငျြးပသှားမှာပါ။ ဘယျသူက အောငျပှဲ ခံသှားမလဲဗြာ………။ ဆနျကာတငျ စာရငျး အပွညျ့အစုံကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1. အဂှေးရိုး (မနျစီးတီး)
2. ဘာနာဒို ဆေးဗား (မနျစီးတီး)
3. ဒီဘရိုငျး (မနျစီးတီး)
4. မာရကျ (မနျစီးတီး)
5. စတာလငျ (မနျစီးတီး)
6. အာနိုး (လီဗာပူး)
7. အလီဆှနျ (လီဗာပူး)
8. ဖာမငျနို (လီဗာပူး)
9. မာနေး (လီဗာပူး)
10. ဆာလတျ (လီဗာပူး)
11. ဗနျဒိုကျ (လီဗာပူး)
12. ဝိုငျနယျဒမျ (လီဗာပူး)
13. အူဘာမီးယနျး (အာဆငျနယျ)
14. ဘနျဇီးမား (ရီးရဲ မကျဒရဈ)
15. ဟာဇကျ (ရီးရဲ မကျဒရဈ)
16. ရိုနာဒို (ဂြူဗီ)
17. ဒီလဈ (ဂြူဗီ)
18. ဒီဂြောငျ (ဘာစီလိုနာ)
19. ဂရဈဇျမနျး (ဘာစီလိုနာ)
20. မကျဆီ (ဘာစီလိုနာ)
21. တာစတီဂနျြ (ဘာစီလိုနာ)
22. ဂြိုအာအို ဖီးလဈ (အတေီကို)
23. ကူလီဘယျလီ (ဆီနီဂေါ)
24. လီဝနျဒေါ့စကီး (ဘိုငျယနျ)
25. လိုရဈ (စပါး)
26. ဆှနျ (စပါး)
27. မာကှငျဟို (ပီအကျဈဂြီ)
28. ဘာပေ (ပီအကျဈဂြီ)
29. တာဒဈ (အဂေကျြ)
#Breaking_News : ဘလွန်းဒီအော်ဆု အတွက် ဆန်ကာတင် စာရင်း ထွက်ပေါ်လာပြီ!!!
ဘောလုံးလောက ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးမားဆုံး ဆုဖြစ်တဲ့ ဘလွန်းဒီအော်ဆု 2019 ခုနှစ် အတွက် ဆန်ကာတင် စာရင်း အယောက် 30 ကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ စာရင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ အတွင်း တကယ်ခြေစွမ်းပြ ကစားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ အများစု ပါဝင်လာခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အကြား အမြင်မတူမှုတွေ ၊ အငြင်းခုံမှုတွေတော့ နည်းပါးနေမှာပါ။ ထူးခြားတာက ဖီဖာ အကောင်းဆုံး 11 ယောက် စာရင်း မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ရာမို့စ် ၊ မာဆယ်လို ၊ မိုဒရစ် တို့ဟာ ဘလွန်းဒီအော်မှာတော့ ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာတောင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဆန်ကာတင် စာရင်း အယောက် 30 ကို သုံးသပ်ကြည့်ရရင် လီဗာပူး အသင်းက အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အသင်းက စုစုပေါင်း7ယောက် အထိ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျေနပ်စရာ တစ်ခုက အင်္ဂလန် ရဲ့ ပြည်တွင်း ဖလားအားလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး အသင်းကလဲ ကစားသမားပေါင်း5ယောက် အထိ ပါဝင်ခဲ့သလို ၊ ရာသီ ကုန်ခါနီးမှ ခွာလိပ်သွားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကလဲ4ဦး အထိ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ပရိသတ်တွေ အားလုံး အံ့အားသင့်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ အေဂျက် နဲ့ စပါး အသင်းတို့က ကစားသမားတွေတောင် ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခဲ့သလို ၊ အာဖရိက ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေက ကစားသမားတွေထဲက ကလပ်မှာပါ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ သူတွေကို ထည့်သွင်းလာခဲ့တာက ဘလွန်းဒီအော်ရဲ့ တန်ဖိုးကို လစ်ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မာကွင်ဟို ၊ ကူလီဘာလီ တို့ဟာ ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။ ဆန်ကာတင် စာရင်းနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး ကစားသမား အချို့ ကတော့ နေမာ ၊ ပေါ့ဘာ ၊ ဟယ်ရီကိန်း ၊ ရာမို့စ် ၊ မာဆယ်လို ၊ မိုဒရစ် ၊ ခရူး ၊ ဆွာရက် ၊ ကန်တီ ၊ ဘေးလ် ၊ ကော့တွိုက် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းကြီ6းသင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် ချဲဆီး နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဟာဇက် ၊ လီဗာပူး ကစားသမား7ယောက် ၊ စပါး က2ယောက် ၊ မန်စီးတီး5ယောက် နဲ့ အာဆင်နယ် က 1 ယောက် ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ယူနိုက်တက် ကတော့ တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ ဆန်ကာတင် စာရင်းအတွင်း ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဆုပေးပွဲကိုတော့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၊ ပဲရစ်မှာ ကျင်းပသွားမှာပါ။ ဘယ်သူက အောင်ပွဲ ခံသွားမလဲဗျာ………။ ဆန်ကာတင် စာရင်း အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. အဂွေးရိုး (မန်စီးတီး)
2. ဘာနာဒို ဆေးဗား (မန်စီးတီး)
3. ဒီဘရိုင်း (မန်စီးတီး)
4. မာရက် (မန်စီးတီး)
5. စတာလင် (မန်စီးတီး)
6. အာနိုး (လီဗာပူး)
7. အလီဆွန် (လီဗာပူး)
8. ဖာမင်နို (လီဗာပူး)
9. မာနေး (လီဗာပူး)
10. ဆာလတ် (လီဗာပူး)
11. ဗန်ဒိုက် (လီဗာပူး)
12. ၀ိုင်နယ်ဒမ် (လီဗာပူး)
13. အူဘာမီးယန်း (အာဆင်နယ်)
14. ဘန်ဇီးမား (ရီးရဲ မက်ဒရစ်)
15. ဟာဇက် (ရီးရဲ မက်ဒရစ်)
16. ရိုနာဒို (ဂျူဗီ)
18. ဒီဂျောင် (ဘာစီလိုနာ)
19. ဂရစ်ဇ်မန်း (ဘာစီလိုနာ)
20. မက်ဆီ (ဘာစီလိုနာ)
21. တာစတီဂျန် (ဘာစီလိုနာ)
22. ဂျိုအာအို ဖီးလစ် (အေတီကို)
23. ကူလီဘယ်လီ (ဆီနီဂေါ)
24. လီဝန်ဒေါ့စကီး (ဘိုင်ယန်)
25. လိုရစ် (စပါး)
26. ဆွန် (စပါး)
27. မာကွင်ဟို (ပီအက်စ်ဂျီ)
28. ဘာပေ (ပီအက်စ်ဂျီ)
29. တာဒစ် (အေဂျက်)